192.168.8.1 - 192.168.8.100
ल्यान नेटवर्कमा 192.168.8.100 आईपी ​​हो। असंख्य व्यक्तिहरूले ईन्ट्रानेट वायरलेस राउटर वाइफाइको लगइन मार्ग फेला पार्न सक्दैनन्। तपाईं लिंकमा थिच्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ: https://192.168.8.100 प्रशासक ईन्टरफेसमा लगईन गर्नुहोस्। यदि तपाईं संलग्न गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं राउटर प्रबन्धन लगइन सम्पादकीयमा सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड बिर्सनुभयो भने, केवल राउटरको लेबल वा म्यानुअल हेर्नुहोस्।
IP ठेगाना 192.168.8.100 प्रयोग गर्नुहोस्, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
सर्वप्रथम, IP ठेगानाहरूको केही साझा विशेषज्ञता प्रमोट गर्नुहोस्। आईपी ​​ठेगानाहरू kinds प्रकारका एबीसीडीईमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा एबीसी प्राय: प्रयोग गरिन्छ। Kinds प्रकारका ठेगानाहरू बीच, एउटा खण्ड संरक्षित ठेगानाहरू हुन्, र यी ठेगानाहरूसहित प्याकहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन। नेटमा तुरुन्तै फैलियो, आईपी सी वर्ग ठेगानाहरूमा संरक्षित ठेगाना हो, सामान्यतया ल्यान नेटवर्कमा प्रयोग गरिन्छ, सी वर्ग ठेगानाको पूर्वनिर्धारित सबनेट मास्क २5.२3.२255.255.255.0.० हो, निर्दिष्ट गर्दछ कि सी वर्ग ठेगाना २ 256 आईपी मिल्छ, स्पष्ट रूपमा एकसँग नेटवर्क प्रतिनिधि, यहाँ एक पनि प्रतिनिधि प्रसारण छ। २ 254 मात्र प्रयोगकर्तालाई नियुक्त गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, नेटवर्क को प्रयोगकर्ता आईपी 192.168.1.0 1-254 बाट हुन सक्छ। तिनीहरू बीचको अन्तर्क्रियाले राउटर नेभिगेट गर्न आवश्यक पर्दैन। सिधा फाइलहरू सार्न सकिन्छ।
भन्न को लागी, यो IP ठेगाना को विचार एकदम व्यापक छ। यो संरक्षित ठेगाना हो, यसले यो ल्यानमा पनि प्रयोग हुन सक्छ भनेर देखाउँदछ। सामान्यतया, यो प्रयोगकर्ता आईपीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, किनकि .१ को मन्टिसा द्वारा आईपी सामान्यतया यो प्रवेशद्वारका लागि राखिन्छ, त्यसैले १ 1 २.१192.168.1.2.२.२-१192.168.1.254२.१192.168.1.2.१.192.168.1.254 वास्तवमै प्रयोगकर्तालाई दिइन्छ। यदि ल्यानमा DHCP सर्भर छ भने, तपाईले आईपी ठेगाना समूहलाई १ XNUMX २.१.XNUMX.२.२-१XNUMX२.१XNUMX.१.२ toXNUMX मा पूरै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस लेखले स्वतः प्रयोगकर्ताको लागि आईपी ठेगाना कन्फिगर गर्दछ।
फरक चीज भनेको वायरलेस राउटरहरू यी दिनहरूमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, आईपी ल्यान पोर्ट यस प्रकारको उपकरणको बारम्बार .1 को एक मन्टिसा छ। यो सुझाव दिइन्छ कि ग्राहकहरूले ल्यान आईपी पोर्टलाई थप ठेगानामा परिवर्तन गर्दछ, ताकि अन्य ग्राहकहरूले अनुमान गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि वायरलेस राउटर ल्यान पोर्ट आईपी भ्रमण गर्नुहोस्, आईपी एक उत्तम विकल्प हो। स्पष्ट रूपमा, ल्यान पोर्ट आईपी पनि सेट गर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्रारम्भिक नेटवर्क सेक्सन प्रयोग गरेर आईपी चयन गर्न आवश्यक छैन। बिभिन्न नेटवर्क सेक्सनको आईपी अतिरिक्त लुकाइएको छ र सुरक्षित छ; जे होस्, तपाईंले सम्बन्धित एकमा प्रयोगकर्ताको एन्ट्रीवे परिवर्तन गर्न दिमागमा राख्नुपर्दछ, अन्यथा नेटवर्कमा कसरी लि to्क गर्ने थाहा हुने छैन।
केही साना फर्म वा स्कूलहरू प्राय जसो आईपी ठेगाना बाहिर सेटको लागि अनुरोध गर्दछ, र अर्को प्रयोग आईपी वितरण पूरा फर्म वा स्कूल प्रणाली नेट पहुँच गर्न प्रयोग गर्नका लागि। त्यस्ता स्कूल वा उद्यमहरूका मेशिनहरू द्वारा लागू गरिएको आईपी ठेगाना इन्ट्रानेट आईपी हो।
यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि भित्री नेटवर्कमा रहेका पीसीहरूले नेटमा रहेका अन्य पीसीहरूमा लि requests्क अनुरोधहरू पठाउन सक्दछन्, अझै पनि इन्टरनेटमा बिभिन्न पीसीहरूले बाह्य नेटवर्कमा एफटीपी सर्वरको कारण आन्तरिक नेटवर्कहरूमा पीसीहरूलाई लि requests्क अनुरोध पठाउन सक्दैन।
विभाग आईपी ​​ठेगाना मेल अन्वेषण
एक टिप्पणी छोड
नाम इमेल वेबसाइट
राउटर सेट अप
TP-Link राउटर सेटअप गर्नुहोस्
वाइफाइ सिग्नल शक्ति जाँच गर्नुहोस्
कालोसूची / ब्लक वाईफाई प्रयोगकर्ताहरू
वाइफाइ हटस्पट के हो?
वाइफाइ मृत क्षेत्रहरू फिक्स गर्नुहोस्
तपाईंको वाइफाइ नेटवर्क सुरक्षित गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित IP ठेगाना के हो?
मेरो इन्टरनेट किन सुस्त छ?
अब मेरो उमेर के हो
नियम र शर्तें
कसरी पूर्वनिर्धारित राउटर आईपी खोज्ने
कसरी तपाईंको राउटरलाई पूर्वनिर्धारित सेटिंग्समा पुनःसेट गर्ने
2022 192.168.8.1 XNUMX With यसको साथ निर्मित GeneratePress